Amaphutha ahlukahlukene lapho ivumelanisa OST Ifayela nge-Exchange Server Mailbox.
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Exchange Recovery Amaphutha Okuvumelanisa
Amaphutha ahlukahlukene lapho ivumelanisa OST Ifayela nge-Exchange Server Mailbox
Ungavula amafolda kufayela le- ifolda engaxhunyiwe ku-inthanethi (.ostifayela, kepha ayikwazi ukuwavumelanisa neseva ye-Exchange, noma ukuhlangabezana nemiyalezo enephutha yokuvumelanisa ekhonjiswe kwilog yokuvumelanisa kufolda yezinto ezisusiwe.
Leli phutha lisho ifayela lakho le- OST ifayela lonakele, noma umyalezo owodwa noma eminingi ye-imeyili ku- OST ifayela lonakele futhi inqubo yokuvumelanisa ayikwazi ukuwalungisa.
Uma kuwumyalezo owodwa noma eminingi eyiphutha edala iphutha, kwesinye isikhathi ungavele ususe le milayezo ukuxazulula iphutha. Futhi iMicrosoft inikeza ifayela le- OST Ithuluzi Lokuhlola Ubuqotho lokho kungalungisa amaphutha amancane wokuvumelanisa futhi. Kodwa-ke, nge-most amacala, isisombululo esihle kakhulu sokuvimbela ukulahleka kwedatha namaphutha aqhubekayo usebenzisa DataNumen Exchange Recovery, Ngokulandelayo:
Vala iMicrosoft Outlook kanye nolunye uhlelo lokusebenza olungangena kufayela le- OST Ifayela.
Thola OST ifayela elidala iphutha. Unganquma indawo yefayela ngokuya ngempahla ekhonjiswe ku-Outlook. Noma sebenzisa Ukucinga ukusebenza ku-Windows ukusesha ifayela le- OST Ifayela.
Phinda uthole idatha engaxhunyiwe ku-inthanethi kufayela le- OST Ifayela. Ukushintshaniswa OST ifayela liqukethe idatha engaxhunyiwe ku-inthanethi, kufaka phakathi imilayezo yeposi nazo zonke ezinye izinto, ebhokisini lakho leposi le-Exchange, elibaluleke kakhulu kuwe. Ukuthola nokutakula le datha, kufanele ukusetshenziswa DataNumen Exchange Recovery ukuskena OST ifayela, buyisa idatha ekulo, bese uwagcina efayeleni le-Outlook PST elinamaphutha ukuze ukwazi ukufinyelela kuyo yonke imilayezo nezinto nge-Outlook kalula nangendlela efanele.
Yenza isipele okwangempela OST Ifayela. Ukuze uphephe, kungcono ulondoloze ngokulondoloza.
Qamba kabusha noma susa eyangempela OST Ifayela.
Lungisa iphutha. Qiniseka ukuthi izilungiselelo ze-akhawunti ye-imeyili ye-Exchange ku-Outlook zilungile, futhi i-Outlook ingaxhuma ngempumelelo kuseva yakho ye-Exchange. Bese u-restart Buka futhi uthumele / wamukele ama-imeyili akho ebhokisini leposi le-Exchange elihambisanayo, elizokwenza i-Outlook idale ifolda entsha engaxhunyiwe ku-inthanethi futhi ivumelanise imininingwane yayo nebhokisi leposi le-Exchange. Uma le ndlela ingasebenzi, iphrofayili yakho yeposi yamanje ayilungile, futhi kufanele uyisuse bese wenza entsha, ngokulandelayo:
Qhafaza i-6.2 Start, bese uchofoza Iphaneli yokulawula.
Qhafaza i-6.3 Shintshela ku-Classic View uma usebenzisa iWindows XP noma izinhlobo eziphakeme.
6.4 Qhafaza kabili Mail.
6.5 Ku- Ukusetha Imeyili ibhokisi lengxoxo, chofoza Bonisa Amaphrofayli.
6.6 Khetha eyodwa yephrofayili engalungile ohlwini bese uqhafaza Susa ukususa.
6.7 Phinda 6.6 kuze kususwe wonke amaphrofayli angalungile.
Qhafaza i-6.8 Engeza ukwakha iphrofayli entsha bese wengeza ama-akhawunti we-imeyili ngokuya ngamasethingi awo kuseva.
I-6.9 Start Buka futhi uphinde uvumelanise ibhokisi lakho leposi le-Exchange, uzothola inkinga inyamalala.
Ngenisa idatha etholwe kusinyathelo 3. Ngemuva kwe- OST Inkinga yefayela ixazululiwe, gcina okusha OST ifayela lokuvulwa kwebhokisi leposi le-Exchange, bese uvula ifayela le-PST elenziwe kusinyathelo 3 nge-Outlook. Njengoba iqukethe yonke idatha etholakele kweyakho yoqobo OST ifayela, ungakopisha izinto ezidingekayo ku-new OST fayela njengoba kudingeka.